Ny tabilao Jelly dia olana iray misy fiatraikany amin'ny mini iPad vaovao | Vaovao IPhone
Ny efijery toa ny jelly dia olana iray misy fiatraikany amin'ny mini iPad vaovao
Indraindray ny olana amin'ny efijery amin'ny fitaovana dia adika amin'ny fivoahan'ny hazavana mahazatra na toa mitranga ao amin'ny mini iPad iPad fahenina vaovao, miaraka amin'ny efijery mampiseho "Famindran-toerana gelatinous" izay lasa fandikana ny "jelly scrolling » amin'ny teny anglisy.
Ity olana ity dia toa tsy mitovy fiatraikany amin'ny mpampiasa rehetra ary midika izany fa raha ny fahitan'ilay mpampiasa azy manokana fa tsy ilay mini iPad vaovao. Ny olana dia rehefa mihetsika eo amin'ny efijery ny rantsan-tànanao, ny lahatsoratra dia toy ny mihetsiketsika ary misy fiantraikany amin'ny mpampiasa sasany noho ny hafa. Afaka zatra an'izany isika raha ny fahitana ary mijanona eo izany, saingy maro ireo mpampiasa no mety ho lasa mankaleo na mahatsiaro ho ratsy ho an'ity olana ity eo amin'ny efijery.
Un sioka navoakan'ny mpamoaka lahatsoratra The Verge Dieter Bohn, mampiseho tsara an'io effet io amin'ny efijery mini iPad:
Ity misy horonan-tsary miadana-mihetsiketsika amin'ny iPad Min dia nihena aho NA INDRINDRA aza tamin'ny dingana iray. Jereo fa miakatra haingana kokoa ny havanana noho ny ankavia.
Amin'ny fampiasana mahazatra dia zara raha mahita azy ianao, saingy nanjary tsikaritra izany indraindray. Amin'ny tontolo dia miala tanteraka izy io pic.twitter.com/iq9LGJzsDI
- Dieter Bohn (@backlon) Septambra 22, 2021
Amin'izao fotoana izao ny olana dia toa tsy singa manokana fotsiny, fa olana bebe kokoa amin'ny ankamaroan'ny fitaovana izany. Izany dia aseho ho toy ny fihodinana miadana kokoa amin'ny ampahan'ny lahatsoratra amin'ny lafiny iray noho ny ilany amin'ny fotoana anaovana horonana.
Ny zava-drehetra dia manondro fa olana ankapobeny amin'ny fitaovana vaovao rehetra sy ankehitriny Mbola ho hita eo raha toa ny tsy fahombiazan'ny tontonana LCD napetraka ao amin'ny mini iPad sa tsy fahombiazan'ny firmware na rindrambaiko. Na izany na tsy izany dia tsy manana an'io olana io ny iPad Pro na ny iPhone vaovao miaraka amin'ny tahan'ny havaozina 120Hz noho ny taham-pahavitrihana avo kokoa.
Ny mpampiasa iray dia mety mahatsikaritra mihoatra ny iray hafa "ity tsy fahombiazana" ity ary ho an'ny maro dia mety ho lasa olan'ny fanina mihitsy aza izy rehefa mihodina. Na izany na tsy izany, ny zava-drehetra dia manondro fa misy io olana io ao amin'ireo fitaovana vaovao ary ho hitantsika ny fivoaran'ny olana. Manana ny iray amin'ireo mini iPad vaovao ve ianao? Voamarikao ve ity fihetsika mihetsika toy ny jelly ity? Avelao ao anaty hevitra ireo hevitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny efijery toa ny jelly dia olana iray misy fiatraikany amin'ny mini iPad vaovao
Toy izao ny fianjeran'ilay iPhone 13 vaovao sy ny hatairany
Ny vahaolana amin'ny tsy fahombiazan'ny famohana amin'ny Apple Watch dia ho avy tsy ho ela